အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 15, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
MarketingSherpa နှင့်အတူ ClickMail စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဆင့်မြင့်အလေ့အကျင့်အပေါ်လက်စွဲစာအုပ်၏ heck အတူတကွထားပါတယ်!
ယနေ့ခေတ်အီးမေးလ်စျေးကွက်သည်ပရိသတ်နှင့်ဆက်သွယ်ရာ၌သိသာသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေတိုးပွားခြင်းအကြား၊ သင်၏တန်ဖိုးနှင့်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သုံးစွဲသင့်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှာခက်ခဲလိမ့်မည်။ သင့်အဖွဲ့အစည်း။
တစ်ဦးအဖြစ် Martech Zone အသုံးပြုသူကိုမတ် ၂၅ ရက်တွင်မှာယူပါ $ 100 လျှော့စျေး pre- ပစ်လွှတ်အထူးနှင့်အတူ! အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၇ နှစ်သက်သေပြပြီးဖြစ်သည့်လက်စွဲစာအုပ်အကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။
မင်းဘလော့ဂ်ကိုခေတ္တလိုက်နာနေတယ်ဆိုရင်မင်းသိတယ် Semrush ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသော့ချက်စာလုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် - ၎င်းသည်သော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်စာမျက်နှာများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းတို့တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သည်။ ထွက်ရှာပါ နမူနာအစီရင်ခံစာ - ကြီးစွာသောပစ္စည်းပစ္စယ! ဤအီးမေးလ်ကိုတုန့်ပြန်သောပထမဆုံးလူ ၅ ဦး သည်အခမဲ့အကောင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်ရှိသော WordPress ဆိုက်ကိုပြန်ယူခြင်း